Otu ihe zuru oke maka ikike na-abawanye na ogo ogo engine engine na-enweta aha na saịtị dị mkpa gbasara saịtị, akara, ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ndị mmadụ. Ndị ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ha na-ekwurịta okwu kwa ụbọchị. Ha ghotara na ichota ndi ahia ha nlezianya nke ntaneti nke kachasi nma. Site na mgbanwe algorithm, ọ bụkwa usoro bụ isi iji melite gị isiokwu rankings na engines ọchụchọ.
Debanye aha onye edemede na Gravatar dị mkpa ka ọ bụrụ na ha nwere ike ijikwa onyinyo ahụ egosiri na profaịlụ onye edemede ha. Enweghị ya, a ga-ajụ anyị mgbe niile melite foto ndị edemede anyị achọghịkwa ijikwa nke ahụ. Gravatar bụ ọrụ dị mfe yana na mmasị kachasị mma nke onye edemede iji mee ka ha nwee ike nweta ihe ngosi a na-ahụ anya na weebụsaịtị niile - ọ bụghị naanị na saịtị anyị.
Ndị mmadụ na-agbanwe foto profaịlụ ha na saịtị mgbasa ozi ha. Ha nwere ike gbanwee ụdị ntutu, ma ọ bụdị nwee foto ọhụụ ọhụụ. Ọ bụrụ na ị dee ederede ederede maka mbipụta, kedu ka ha si emelite foto gị nke kachasị ọhụrụ? Azịza ya bụ Gravatar.
Na WordPress, edepụtara foto onye edemede site na eriri ezoro ezo nke email email onye edemede. Adreesị ozi ịntanetị nke onye edemede anaghị egosipụta n'ihu ọha. Na akaụntụ Gravatar ga-enye gị ohere ijikwa ọtụtụ adreesị email na akaụntụ ahụ, na ọtụtụ onyonyo.